अभय पाण्डे काठमाडौं, ४ असार
जिन्दगीका सफर, है ये कैसा सफर ?
कोइ समझा नही, कोइ जाना नही
२२ वर्षीय आयुषको जिन्दगीको यात्रा त्यही दिन टुंगिएला भनेर के थाहा थियो र ? मोटर साइकल दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनु दुई घण्टाअघि ऊ र म एउटै कार्यक्रममा सहभागी थियौं । हेर्नमा सुन्दर र मृदुभाषी थियो आयुष । ऊसँगै दुर्घटनामा परी अर्को कलिलो भाइ सन्तोष पनि ईश्वरको प्यारो भयो ।
आयुषलाई कार्यक्रममा भेटेको करिब दुई घण्टापछि मित्र सुरेशको फोन आयो । उनले आयुषको अवस्था चिन्ताजनक भएको खबर सुनाए । त्यस दिन घरमा बिरामी आमा र म मात्र भएकाले तत्काल अस्पताल जान सकिनँ । तर , निद्रा भने रातभर परेन । म आयुषका बाआमालाई राम्रोसँग चिन्थें । भोलिपल्ट सबेरै उसको घर पुगें । त्यहाँ पुग्नुअघि नै आयुष बितेको खबर पाइसकेको थिएँ । आयुषका बुबा मलाई देखेर अँगालो मारी रुन थाले । एक मात्र सन्तान गुमाउनुको पीडा म बुझ्थें ।
घरभित्रबाट आएको आमाको रोदनचाहिँ मुटुलाई चिर्ने नै खालको थियो । उनी भन्दै थिइन्, ‘बाबु, तिमी कहाँ छौ ?’
करिब चार–पाँच मिनेटको अन्तरालमा उनले सोध्ने प्रश्न उही हुन्थ्यो, ‘बाबु, तिमी कहाँ छौ ?’ सायद घरीघरी उनी बेहोस् हुने गर्थिन् । उनको त्यो अवस्था कानले त बल्लतल्ल सहन सक्थ्यो तर आँखाले हेर्ने हिम्मतचाहिँ गर्न सकेन ।
सन्तोषकी आमालाई त म चिन्दिनँ तर मलाई पक्का विश्वास छ, उनको हालत पनि यस्तै छ । केहीबेर बाहिर बसेर म घरतर्फ लागें ।
घर फर्कंदै गर्दा मेरो मनमा आमाको त्यही प्रश्न गुन्जिरह्यो । मानिस जिन्दगीको दौडधुपमा जिन्दगीका गहन प्रश्न गर्दैन । तर, त्यस दिन म आफैंलाई सोध्न बाध्य भएँ । आखिर आयुष कहाँ छ त ? उसको शरीर त त्यस बखतसम्म अस्पतालमै थियो, पोस्टमार्टम कक्षमा ।
त्यसो भए, त्यो जानेचाहिँ को थियो त ? आयुषको आत्मा ? आत्मा हामी जिउँदो हुँदा कहाँ भेटिन्छ ? शरीरको कुन भागमा भेटिन्छ ? वा त्यो पूरै शरीरमा छरिएको हुन्छ वा आत्मा शरीरभन्दा बाहिर बास गर्छ ?
फेरि सोचें, कति कलिलो उमेरमै गयो । तर, मानिसको जाने सही उमेर कुन हो त ? जुन उमेर काटेपछि ‘गए’ पनि आफन्तलाई पीडा हुँदैन । मानिस किन जन्मिन्छ ? एक दिन मर्नु नै छ भने जन्म नै किन लिन्छ ? के मानिस जन्मनुको कुनै उद्देश्य छ ? या जन्मेपछि उद्देश्य खोज्छ मानिस ? के मानिसको मात्र उद्देश्य हुन्छ ? या अन्य जीवजन्तुको पनि हुन्छ ? भगवानको नजरमा सबै प्राणी समान नै हुन् । रकेट वा बुलेट रेल बनाएर मानिस भगवानको नजरमा अरु जीवजन्तुभन्दा सर्वश्रेष्ठ वा ‘उद्देश्यलायक’ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
विख्यात जीव वैज्ञानिक रिचार्ड डकिन्सको भनाइअनुसार त हामी केवल डीएनएले बनेका यन्त्र हौं, जसको एक मात्र उद्देश्य आफ्नो डीएनएको थप प्रतिलिपि बनाउनु हो । हामी त्यसैका लागि संसारमा छौं । तर, डकिन्सले भनेअनुसार के हामी एक यान्त्रिक जीवन जिउन मात्र बनेका हांै र ? त्यसो भए जिन्दगीको रस कहाँ गयो त ?
माया, सुख, दुःख, करुणा, जिम्मेवारी, नैतिकता, स्वतन्त्रता, मुक्त इच्छा (फ्री विल ) जस्ता ‘महानतम’ अयान्त्रिक भाव केवल हाम्रा भ्रम मात्र हुन् त ? वा डीएनएको प्रतिलिपि बनाउन सहयोग गर्ने पार्टपुर्जा मात्र हुन् ? आयुष कुन उद्देश्य लिएर जन्मेको थियो ? के ऊ आफ्नो उद्देश्य पूरा गरेर हामीबाट बिदा भएको हो त ? कोसँग छ, यसको जवाफ ?
अनि यो आमाको माया वा पीडा भनेको आखिर के हो ? यो वैज्ञानिकले भने जस्तै मस्तिष्कको स्नायु र त्यससँग सम्बन्धित रसायनको खेल मात्र हो ? के विज्ञान, तर्क र प्रमाण हाम्रो जीवन जिउने आधार हुन सक्छन् ? मैले माया वा पीडाको भनेको रसायनको खेल मात्र हो भनेर आयुषकी आमालाई सुनाए के उनको पीडा कम हुनेछ ? आमाको कुरा छोडौं, के यो वैज्ञानिक तथ्यले मेरो दुःख कम भयो त ? मैले त उहिले नै पढेको हो, पीडा र मायाको रासायनिक सिद्धान्त ?
दिमागमा भएको ज्ञान शक्तिशाली हो कि मुटुमा चल्ने अनुभूति ? मृत्यु शाश्वत सत्य हो, यो कुरा आयुषकी आमालाई राम्ररी थाहा छ । तर, यो ज्ञानले आमाको मनलाई सान्त्वना दिन सकेन त ? मृत्युपछि कोही पनि फर्केर आउँदैन भन्ने कुरा आमालाई थाहा छ । तर पनि उनी छोरा आउला कि भनेर किन ढोकातिर टोलाउँछिन् त ? उनीलाई थाहा छ, बाबु आउँदैन भनेर । तर पनि किन उही प्रश्न दोहोर्याउँछिन्, ‘बाबु, तिमी कहाँ छौ ?’
आयुष कहाँ छ ? कसैलाई थाहा छैन । जिन्दगीका गहन प्रश्नहरुको जवाफ कसैसँग छैन । भनिन्छ, हामीले जुन दिन ती प्रश्नको जवाफ भेट्टाउनेछौ, त्यस दिन जिन्दगीले प्रश्न नै बदलिदिनेछ ।
आज आयुषको १३औं पुण्य तिथि हो । दुई दिनपछि सन्तोषको १३औं पुण्य तिथि हुनेछ । दुवैको आत्मालाई शान्ति मिलोस् र दुवैका बाआमालाई पीडा सहन सक्ने शक्ति भगवान्ले प्रदान गरून् । अलबिदा आयुष ! अलबिदा सन्तोष !
प्रकाशित मिति: बिहीबार, असार ५, २०७६, ००:४३:००